Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » Ndị Taliban chọrọ ka Turkey rụọ ọdụ ụgbọ elu Kabul
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News • Akụkọ dị iche iche
Ndị Taliban chọrọ Turkey ka ọ na -arụ ọdụ ụgbọ elu Kabul
Onye isi ala Turkey Erdogan kwuru na ekwesịrị iweghachi udo na Kabul tupu ịme mkpebi na ọdụ ụgbọ elu, na -agbakwunye na enwere ihe ize ndụ nke 'ịbanye n'ime' ihe ga -esi ike ịkọwa ihe ejighị n'aka na ọrụ a ga -ekwe omume.
Turkey kpebiri na ndị Taliban rịọrọ ka ọ nyere aka rụọ ọdụ ụgbọ elu Kabul.
Onye isi ala Turkey Recep Tayyip Erdogan kwuru na mkparịta ụka ya na ndị Taliban na -aga n'ihu.
Mkparịta ụka a mere n'ụlọ ọrụ ndị agha n'ọdụ ụgbọ elu Kabul ebe ndị nnọchi anya Turkey nọ.
Turkey nwere mkparịta ụka mbụ ya na ndị Taliban gbasara enyemaka na -agba ọdụ ụgbọ elu isi obodo taa na ụlọ ọrụ ndị agha n'ọdụ ụgbọ elu Kabul ebe ụlọ ọrụ nnọchi anya Turkey nọ nwa oge.
Onye isi ala Turkey Recep Tayyip Erdogan
Dabere na Onye isi ala Turkey Recep Tayyip Erdogan, Ankara ka na -enyocha onyinye Taliban iji nyere aka n'ịrụ ọrụ Ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai (KBL) na Kabul na enwere ike nwekwuo mkparịta ụka tupu eme mkpebi ahụ.
Erdogan kwuru, "Anyị na ndị Taliban nwere mkparịta ụka mbụ anyị, nke were awa atọ na ọkara." "Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enwe ohere ịme ụdị okwu a ọzọ."
Turkey nwere ọtụtụ narị ndị agha na Afghanistan dịka akụkụ nke ọrụ NATO, ọ bụkwa ya na -ahụ maka nchekwa ọdụ ụgbọ elu afọ isii gara aga.
N'ịzaghachi nkatọ ụlọ maka njikọ aka Turkey na otu ndị na -eyi ọha egwu, Erdogan kwuru na Ankara enweghị "okomoko" iguzo nkịtị na mpaghara ọgba aghara.
“Ị maghị ihe atụmanya ha bụ ma ọ bụ ihe atụmanya anyị bụ n'ekwughị okwu. Kedu ihe bụ diplọma, enyi m? Nke a bụ diplọma, "Erdogan kwuru.
Turkey nọ na -eme atụmatụ inye aka chekwaa ma gbaa ọdụ ụgbọ elu Kabul, mana na Wednesde ọ malitere ịdọrọ ndị agha na Afghanistan - ihe pụtara ìhè nke Ankara hapụrụ ihe mgbaru ọsọ a.
Erdogan kwuru na ndị Taliban chọrọ ugbu a ilekọta nchekwa na ọdụ ụgbọ elu, ebe ha na -enye Ankara nhọrọ nke ijikwa ngwa agha ya.
O kwuru na ejima ogbunigwe ogbunigwe nke gburu opekata mpe mmadụ 110, gụnyere ndị agha US 13, na mpụga ọdụ ụgbọ elu n'oge ụbọchị mgbapụ ngwa ngwa na Tọzdee gosipụtara mkpa ọ dị ịmata nkọwa nke otu a ga -esi chebe ọdụ ikuku.
Erdogan kwuru na ekwesịrị iweghachi udo na Kabul tupu ịme mkpebi na ọdụ ụgbọ elu, na -agbakwunye na enwere ihe ize ndụ nke 'ịbanye n'ime' ihe ga -esiri ike ịkọwa nyere enweghị mgbagwoju anya na ọrụ enwere ike.
"Taliban kwuru, sị: 'Anyị ga -ahụ maka nchekwa, ị na -arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu'. Anyị emebeghị mkpebi ọ bụla n'okwu a, "Erdogan kwuru.
Ka ọ dị ugbu a Ankara ewepụla opekata mpe ndị agha 350 na ihe karịrị mmadụ 1,400 na Afghanistan kemgbe ndị Taliban weghaara n'ọnwa a.
Erdogan, onye katọrọ ndị Taliban na mbụ ka ọ na -agafe obodo na -aga Kabul, kwuru na Turkey na -achọ imecha mwepụ na mwepụ ndị agha ngwa ngwa o kwere mee.